tena » vaovao » Ahoana no mifidy ny sary ny anatiny
Ny sary hoso-doko dia ampahany lehibe amin'ny atitany, fa ny kanto kosa misy paleta lehibe be, ary tsy ny loko ihany, ary amin'ny fomba fanoratana canvases, fitaovana sy fomba. Noho izany, ny safidin'ny sary hosodoko ho an'ny efitrano dia tokony hanatonana amim-pitandremana fatratra ary fotoana be dia be no tokony hatokana ho an'ity dingana ity..
Maka canvases, henoy ny intuition-nao, satria ny canvases, izany dia hahantona amin'ny rindrin'ny tranonao na ny biraonao, tsy maintsy manana angovo miabo. Ireo sary voajanahary dia tsy tokony ho azo, ady, ny alahelo, LOZA. Ary fitsipika iray hafa: mifantina sary misy lohahevitra manokana ho an'ny efitrano tsirairay.
Andao hofaritana amin'ny alàlan'ny ohatra amin'ny toerana manokana ao amin'ny trano iray, ny fomba hisafidianana ny sary mety.
Ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny dia asaina mividy sarimihetsika imasonista na sary miavaka. Manoro hevitra ireo manam-pahaizana Feng Shui fa mila mihaino ny fihetseham-ponao ity efitrano ity: raha tianao, ohatra, sary mena, manantona lamba lamba eo amin'ny rindrina ary jereo akaiky - inona no ho tsapanao, inona no lazain'ny intuition.
Ho an'ny efitrano fandriana, aiza no miala sasatra, Mitonia, ny sary amin'ireo sombin-tantaram-pitiavana mety indrindra, tia na seho fandriana.
Ao an-dakozia, na ny efitra fisakafoana dia mampino mirindra mendrika ho any amin'ny lamba, izay hoso-doko isan-karazany miaraka amin'ny voninkazo Mbola lifes na sary. Koa tsara ao anatiny dia azo voadio tamin'ny haingon-trano sy ny vazy takelaka. Ary ny amin'ny loko, ny manam-pahaizana ao amin'ny Feng Shui hoe:, fa ilaina predominance maitso, izay manohana ny singa hazo, Fa ireo kosa dia hevi tokoa ny loza ity ary. Fa na dia ny fisian'ny mena tonga soa: Ity loko maneho manainga ny fahazotoan-komana sy ny an-trano.
Raha mba hijery ny fianarana, eto no mila mijery akaiky any an-tendrombohitra toerana manodidina, rano mikoriana. Ny zavatra, Atsinanana manam-pahaizana mino fa, Toy izany sary hitondra azy ireo harena sy tompon'ny harena tsara.
Ankizy Tafo no nanolorana azy ho handravaka sary amin'ny tarehin-tsoratra avy amin'ny angano, biby, vorona, amim-pifaliana sy tsara fanoharana. Fa isan-karazany ny abstraction mifanaraka tsara ho any an-dalantsara. Inona ny manam-pahaizana hoe Feng Shui amin'ny? Ny toro-hevitra - mijery sy mihaino ny zanakao. Raha tiany ny loko mavo - sary tonga lafatra ny masoandro, raha manga - rano, sns. D. Zanak'osy sy mahery setra ary mpanao toetra, sary hoso-doko mifanentana mifanohitra - mangina, tsy mavitrika. Mifanohitra: mangina zaza - mavitrika sary.
Ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra dia ny manaraka izao: araka ny tokony ho antonona eo amin'ny lamba anatiny. Eto dia zava-dehibe ny mifidy ny fomba, fihetseham-po, ny mandoko mifanaraka amin'ny foto-kevitra rehetra ny toerana.
Andeha isika hijery ohatra manokana. Raha ny endriny iray manontolo ao an-tranonao dia noforonina tamin'ny karazana haitraitra mahazatra, dia mila mividy sary hosodoko taloha ianao, na ny asan'ny tompo taloha. Na izany aza, raha noforonina tamin'ny endrika minimalista ny endriny iray manontolo, dia sanganasa tanteraka ny sangan'asa taloha.. mazava ho, fa amin'ny tranga toy izany dia mendrika ny mividy lamba avant-garde na sary hosodoko tsy mahazatra.
Ilaina ny mitandrina ny volavolan-doko. Ho mirindra ireo sary, ny lokon-doko izay manako ny lokon'ny fanaka sy ny rindrina. Ny afovoan dia hahazo ny tena mahaliana sy tsy mahazatra tarehy.
Interior famolavolana, natao in Art Nouveau fomba, Recommended fanampin watercolor na miloko tanora.
Raha ny trano na ny birao dia tsy manana foto-kevitra na fomba nanambara singa, avy eo ny lamba nofantenana, mifantoka amin'ny loko. Ny fomba roa variants.
voalohany. Ny efitra iray manontolo dia nohariana araka ny faritra, tsy miandany. bebe kokoa, -katerena sary, tamin'izany andro izany dia manana iray na roa loko mamirapiratra accents. Ary avy eo ny sisa amin'ny Atitany dia Hameno ny Accessories amin'ny loko ny sary.
faharoa. Hevi tanteraka rehetra nambaran'ny, anisan'izany ny Accessories. Ary afa-tsy ny farany nifidy ny sary hoso-doko, fa ny faritra, dia mameno ny anatiny manontolo. Na izany aza, io safidy io fa tsy hoe zavatra sarotra.
Wall famolavolana zavakanto - dia marefo raharaha. Tsara homarihina, izay tena tonga lafatra lamba dia hijery amin'ny tany lemaka mandan'i feo malefaka. Inona avy ireo fomba sy ny fomba misy, sary hoso-doko mba handravaka ny efitrano toerana?
mahazatra. Toetra mampiavaka ity dia fomba hentitra tsipika mahitsy. Matetika, io no fomba raiki-tampisaka ao amin'ny kilasika interiors.
kanto mikorontana. Very tany am-boalohany sy ny fomba maoderina ny rindrina fandravahana.
vanguard. Ny fototry ny fomba - ny habeny isan-karazany sy ny endriky ny filanjana.
Method - "borderless". Tena mahaliana fomba - dia nanao fandaharana manodidina ny foibe singa hafa sary hoso-doko. Amin'izany fomba izany, zarao ny tena sary.
Tsy vitan'ny manolotra sary hoso-doko endrika anatiny mba handravaka ny an-trano. Tsy afaka ny ho: afisy, sary, dian, fitaratra sy ny hafa.
Farany dia aoka isika hiresaka momba ny, ny fomba hanaovana safidy ny sary ny lokony.
safidy One. Mandoko loko faritra, dia mety ny anatiny, toy ny hoe levona ao. loko rehetra, izay eo amin'ny lamba, misy eo amin'ny sary. Matetika, dia ny hevitra ny lamba eo amin'ny manodidina miray feo amin'ny tontolo iainana. Indraindray ny sary dia rohy amin'ny faritra, ny loko ny efitrano. Amin'ity tranga ity, ny lahasa lehibe indrindra amin'ny sary dia ny manaisotra ny rindrin'ny fahabangana..
Safidy faharoa. Ny sary dia nolokoina tamin'ny loko anatiny., fa misy loko iray na roa mifameno. Mamelona ny efitrano ity fomba ity..
Safidy fahatelo. Kanvas rehetra, izay manatrika ny efitrano, voasoratra miloko marevaka sy tototry, manjaka ny atitany. Azonao atao ny mamela ny lamba miaraka amina accents mamiratra., na manampy sy manohana ny paleta hosodoko miaraka amin'ny kojakoja hafa. Ity fomba ity dia toa mirindra tsara ao anaty., noforonina in tsy miandany na tsy miandany quasi-loko. Ihany amin'ny alalan'ny fisafidianana ny sary, tsy maintsy mihaino ny loko saturation, kanto singa fototra, fanoratana ny lamba.
manantena izahay, Noho ny soso-kevitra etsy ambony, Ho afaka misafidy ny tsara sary ho an'ny afovoan-trano!